सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ३-३ महिनामा बाँडिने, नयाँ दर सार्वजनिक – कस्को भत्ता कति पुग्यो ? (सूचीसहित) – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ३-३ महिनामा बाँडिने, नयाँ दर सार्वजनिक – कस्को भत्ता कति पुग्यो ? (सूचीसहित)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ३-३ महिनामा बाँडिने, नयाँ दर सार्वजनिक – कस्को भत्ता कति पुग्यो ? (सूचीसहित)
दीप संञ्चार भदौ २२, २०७८ गते २०:१८ मा प्रकाशित
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब प्रत्येक ३-३ महिनामा वितरण गर्ने भएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेपश्चात नयाँ भत्तादर पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
गत बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ का लागि बढाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको करिब एक साता पुग्न लाग्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएपछिको नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तादर सार्वजनिक गरेको हो ।
अब त्रैमासिक वितरण
यसअघि चौमासिक अर्थात ४-४ महिनामा वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अबदेखि भने त्रैमासिक अर्थात ३(३ महिनामा नै वितरण हुने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौमासिकबाट त्रैमासिक वितरण हुने निर्णयसँगै अब हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक असोज, दोस्रो त्रैमासिक पुस, तेस्रो त्रैमासिक चैत र चौथो त्रैमासिक असारमा वितरण गरिने भएको हो ।
उनले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली माघमा संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयले साउनदेखि लागू गर्न भनिसकेको छ । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्रैमासिकरूपमा निकासा तथा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार अबदेखि ३(३ महिनामा वितरण हुन्छ ।’
कस्को भत्ता कति पुग्यो
१ जेष्ठ नागरिक भत्ता ७० वर्ष माथि ४०००
२ अपागंता भत्ता (क) वर्ग ३९९०
३ लोपोन्मुख जाति ३९९०
४ जेष्ठ नागरिक दलित २६६०
५ जेष्ठ नागरिक एकल महिला २६६०
६ जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएको २६६०
७ विधवा आर्थिक सहायता २६६०
८ अपागंता भत्ता ९ख० वर्ग २१२८
९ बाल पोषण भत्ता ५३२